DHAGAYSO:Wararkii ugu dambeeyay ee dabkii ka kacay suuqa Bakaaraha – Puntlandtimes
DHAGAYSO:Wararkii ugu dambeeyay ee dabkii ka kacay suuqa Bakaaraha
MUQDISHO(P-TIMES)- Guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banadir Maxamed Cabdullaahi Tuulax ayaa warbaahinta u sheegay in dabka uu baabi’iyay hanti badan oo ay laheyd ganacsatada isla markaasna ay xakameeyeen in dabka uu kusii fiday guud ahaanba suuqaasi.
Tuulax wuxuu sheegay in qayb badan oo kamid ah suuqa uu gubtay balse inta ay ogyihiin aysan jirin dadka ku dhintay dabka.
Maxamed Cabdullaahi Tuulax ayaa sheegay inay wadaan baaritaano ku aadan waxa dhaliyay dabka iyo dhibaatada rasmiga ah.
Dabka ayaa ka kacay qaybta Hudheyda dukaan yar oo ku yaalla, waxaana uu gaaray ilaa iyo qaybta maacuunta oo ku dhegan suuqa Khaliifa.
Masuuliyiin ka tirsan dowladda ayaa lagu waddaa in ay taggaan saacaddaha soo socda goobta uu dabku ka kacay si loo qiimeeyo hantida ku gubatay.
Abshir Cismaan says:
Hawiye hutu futomadoobe hantidi ay inaga dhaceen 1991 ayaa habaarka ku riday.
Anaga Bosasso xaaraan kuma aynu dhisin saa hantida taala Muqdisho BiLiLiQo waaye. Gubashada suuqa Bakaaraha xaq waaye.
[url=https://paydayloansinstant.us.com/]payday loans instant approval[/url] [url=https://cash-advance.us.com/]compare personal loans[/url] [url=https://creditpersonalloans.us.com/]small personal loans with bad credit[/url] [url=https://loans-nocreditcheck.us.com/]loan no credit check[/url] [url=https://directlender.us.com/]poor credit loan[/url]
[url=https://levitra911.com/]levitra[/url] [url=https://prednisolone5.com/]prednisolone online[/url] [url=https://sildenafilcitrategenericviagra.com/]viagra online india[/url] [url=https://lisinopril20.com/]lisinopril 10mg[/url] [url=https://cialisq.com/]cialis 10mg[/url]
[url=https://paydayloansinstant.us.com/]instant payday loans[/url] [url=https://loans-nocreditcheck.us.com/]emergency loans no credit check[/url] [url=https://directlender.us.com/]direct lender payday loans[/url] [url=https://cash-advance.us.com/]cash advances[/url] [url=https://creditpersonalloans.us.com/]small personal loans with bad credit[/url]
New Puntland says:
Aniga waxa oran laha Suuqa Bililiqada(bakaaraha) ha la xiro dhamantiis.